CIN Khabar भोजपुरमा विप्लव कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान
भोजपुरमा विप्लव कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान प्रहरी जवान सहित दुईको मृत्यु
सीआईएन बुधबार, असार २५, २०७६, ०१:५३:००
काठमान्डु । भोजपुरमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
सदरमुकामस्थित शनिबारे हाट लाग्ने ठाउँमा गोली हानाहान भएको भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरी खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुवै तर्फका एक/एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा प्रहरी जवान सञ्जिव राई र विप्लव कार्यकर्ता निरकुमार राई रहेका छन् । आज बिहान साढे आठ बजे भएको घटनापछि भोजपुरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
सादा पोशाकमा रहेका प्रहरीमाथि विप्लव कार्यकर्ताले पछाडिबाट गोली हानेको र सँगै रहेका अर्का प्रहरीले जवाफी फायर गरेको प्रजिअ खतिवडाले बताउनुभयो ।
गोली लागेर घाइते भएका दुवैजनालाई अस्पताल पु¥याए पनि चिकित्सकले मृत घोषित गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २५, २०७६, ०१:५३:००
सावधानी नहुँदा नेपाल सर्ने रोगको जोखिममा
३ महिने शिशुको गुप्ताङ्ग कुकुरद्वारा क्षतविच्छेद
सभामुखमा सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित
फुसको छानो विस्थापित अभियान सुस्त
१८ सदस्यका लागि ४५ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा, मतदान जारी
धादिङ र मकवानपुर घटनामा १४ जनाको मृत्यु
स्ववियु नेतृत्वमा टीका लगाउने कि क्षमता चिन्ने ?
बितेका दस वर्षमा बागमतिमा धेरै पानी बग्यो । पाटन संयुक्त क्याम्पस गेटबाट सयौँ विद्यार्थी भित्रिए । त्यति नै विद्यार्थी बाहिरिए । केही विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उनीहरूका कतिपय पूरा गर्नै पर्ने मागहरू पूरा भएका छैनन् । विद्यार्थी सङ्गठनले जति सके त्यति गरिरहेका छन् । आईतबार, माघ १२, २०७६
छाउपडीविरुद्ध अदालतको पहिलो कारबाही
मृतक पार्बतीका जेठाजु छत्र रावतलाई मुलुकि अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ४ बमोजिम ४५ दिन कैद फैसला गरिएको हो । गत मंसिर १५ गतेराती पार्बतीको छाउगोठमा मृत्युभएपछि उहाँका जेठाजु रावतलाई चारदिनपछि १९ गते प्रहरीले पक्राउगरी मुद्दा चलाएको थियो । शुक्रबार, माघ १०, २०७६
कसले सुन्ने किसानका समस्या ?
किसानले भनेको समयमा मल, विउविजन पाउँदैनन् । अनुदान, सेवा सुविधा पहुँच वालाले लिन्छन् । उब्जाएको कृषि उपजले सहजै बजार पाउँदैन, बजार भेटिएपनि विचौलियाले मूल्य खाइदिन्छ । बिहिबार, माघ ९, २०७६